Iindaba -U-Hebei wokuqala wolwakhiwo lwesakhiwo sentsimbi yoluntu malunga nokuqala ukwakhiwa eShijiazhuang
Hebei isakhiwo sentsimbi ibandla lokuqala eluhlaza malunga ukuqala ulwakhiwo e Shijiazhuang
Nge-13 kaJanuwari, "Urhulumente wePhondo waBantu be-Hebei ekuphunyezweni kophuhliso lwezakhiwo zendlela yokuhlangana ekuphunyezweni kweembono" zokukhululwa okusemthethweni, ukukhawulezisa ngamandla ukusetyenziswa kwendibano ye-Hebei kunye nophuhliso. Iqela le-Zhuo Da kunye namashishini amakhulu aphantsi korhulumente i-King Kong Group, baya kusebenzisa itekhnoloji yokuhlanganisa ilaphu eluhlaza, iQela laseKing Kong libekwe kwisiXeko saseShijiazhuang, kwiZhengding County, Jingxing County, kwindawo endala, indawo yezityalo ezilahliweyo ezingama-1 000 eehektare zomhlaba kuphuhliso, kwiPhondo Hebei ukwakha isakhiwo sentsimbi yokuqala yendibano enkulu-isikali. Izakubakhona eShijiazhuang nakwiPhondo le-Hebei ukukhuthaza ukusetyenziswa kwesakhiwo esiluhlaza sentsimbi sokwakha umlinganiso, ekhokelela kwindibano yePhondo le-Hebei, kuphuhliso lweshishini lokwakha.
Oku kulandelayo kuyafana ne
Iqela leZhuoda kunye neQela laseKing Kong batyikitye isivumelwano sokusebenzisana
KwiPhondo le-Hebei, isakhiwo sokuqala sentsimbi esihlangeneyo esihlangeneyo ekuhlaleni siza kuqala ukwakha eShijiazhuang. Ngomhla we-3 ku-Matshi, iZhuoda Group kunye neQela laseKing Kong "ukuphuhlisa ulwakhiwo lwesixeko esitsha kunye neJijia (Zhuoda) yeprojekthi-yokubonisa ukwakha inkqubo yokubonisa ukuqala komsitho wokusayina" obubanjelwe eShijiazhuang City. La macala mabini atyikitye "intsebenziswano kuphuhliso lwesivumelwano seprojekhthi yezindlu" liQela laseKing Kong lokudlala izibonelelo zomhlaba kunye nezixhobo zeprojekthi, iZhuo Da Group ukudlala izibonelelo zophuhliso nolwakhiwo kunye nendibano yolwakhiwo, iKing Iqela laseKong libekwe kwisiXeko saseShijiazhuang, kwiZhengding County, Jingxing County,, kwiifektri zeNkunkuma nakwezinye iihektare ezili-1 000 zomhlaba zokudityaniswa kophuhliso lomhlaba, ulwakhiwo lwezindlu, indawo zokuhlala kunye nezinye iiprojekthi ukukhuthaza ukuphuculwa kweendawo zokuhlala abantu eShijiazhuang. nenkqubo yophuhliso lwedolophu.
I-King Kong Group, iZhuoda Group ukuphuhlisa ulwakhiwo lwesixeko esitsha kunye nophando nge-Hebei kunye nendibano yokwakha iprojekthi yokubonisa ukuqala kwesiza somsitho
Iqela laseKing Kong ngamashishini aphantsi korhulumente kwiSixeko saseShijiazhuang, i-injini yangaphakathi yaseChina iyinto ephambili kudidi olukhulu lwamashishini aphambili. Ngenxa yezizathu zembali, iQela laseKing Kong lelakwindawo yokuhlala yabantu abadala engaphezulu kweminyaka engama-40, izindlu ezininzi ziye zaba yingozi. Kwiminyaka yakutshanje, urhulumente kamasipala waseShijiazhuang ukhuthaze ngamandla uguquko lweshedi, utshintsho lwakudala, ukuphucula imeko yokuhlala, ngelixa esenza ngamandla ishishini lokwakha eliluhlaza, kwaye ekugqibeleni banegalelo kwintsebenziswano yaseKing Kong naseZhuoda.
"Zhuoda izixhobo zokwakha ezintsha kunye nolwakhiwo lwendibano eluhlaza ngokuhambelana nenkqubela phambili yeshishini lokwakha likazwelonke, kwizicelo zokwakha, izibonelelo zicacile." Usihlalo weQonga laseKing Kong uWang Jiming ukuba iimpawu ezibalaseleyo zesakhiwo esiluhlaza seZhuoda sisiseko sentsebenziswano phakathi kwala macala mabini. Uthe ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokwakha eluhlaza iZhuoda, kungekuphela ulondolozo lwamandla okusingqongileyo, kwaye ixesha lokwakha lifutshane, kakhulu kufanelekile kuphuhliso olukhulu lwezinto ezinkulu. Ndiyakholelwa ukuba ukusebenzisana noTshintsho lweZhuo Da lwendawo yokuhlala yaseKing Kong yeQela, inkunkuma yezityalo, inokukhawuleza ukuphucula imeko yokuhlala, yonyuse isixeko saseShijiazhuang. "
UWang Jiming, uSihlalo weQela laseKing Kong, uthethe kakhulu ngentsebenziswano phakathi kwala macala mabini
Le ntsebenziswano ibalulekileyo. ” Umsitho wokutyikitya, i-Zhuoda Group elisekela-mongameli olawulayo u-Yang Jigang uthe intsebenziswano neQela lase-King Kong, ayivulelanga kuphela isakhiwo esiluhlaza esikhulu e-Zhujia Zhuang isicelo esikhulu, kodwa ivule nePhondo le-Hebei kunye ne-Shijiazhuang City kuphuhliso olukhulu isicelo esidibeneyo sokwakhiwa kwendibano yentsimbi yeyokuqala yohlobo lwayo. Iqela leZhuo Da njengamashishini okuqala okuqala ophuhliso lokuthengiswa kwezindlu eShijiazhuang, eShijiazhuang sele ephuhlisiwe kumashumi ezigidi zeemitha zesikwere zokuhlala, kodwa inaliti "yendibano eluhlaza" yezinto zophuhliso lwentsebenziswano, iya kuba yiZhuoji eShijiazhuang kulwakhiwo loluntu lwedolophu. iprojekthi "indawo yokuqala"
Usekela-Mongameli olawulayo we-Zhuoya Group u-Yang Jigang uthe la macala mabini avula intsebenziswano kwiPhondo lase-Hebei kunye nase-Shijiazhuang City kwisiqendu esikhulu sophuhliso loluntu ekusetyenzisweni kwesakhiwo sensimbi sokuqala kwendibano.
U-Yang Jigang wakhankanya ukuba nge-13 kaJanuwari, "uRhulumente wePhondo laBantu be-Hebei kuphuhliso lwezakhiwo zendlela yokuphumeza izimvo" wakhululwa ngokusemthethweni, ukukhawulezisa ngamandla ukusetyenziswa kwendibano kunye nophuhliso lwe-Hebei. I-Dongfeng, nge-1 kaMatshi, iZhuo Da kunye neZiko loPhando lePhondo laseHebei batyikitya, uyilo oluhlanganisiweyo, itekhnoloji, iimveliso kunye nezinye izixhobo, ukwaziswa kwamashishini amakhulu aphakathi, amashishini aseburhulumenteni kunye namaziko emali, ukwakha uphando lweJi (Zhuoda) umanyano lomzi mveliso. Le ntsebenziswano ngumanyano lweshishini ekuphuhliseni iprojekthi ngokudibeneyo, “Sizakuqhubeka ukugxila kulwakhiwo lwendibano eluhlaza ekusetyenzisweni kokufudukela kwabantu ezidolophini, sincede ikomkhulu lephondo lenkqubo.
Usihlalo weQela leKing Kong uWang Jiming, usekela-mongameli weqela laseZhuoda u-Yang Jigang egameni lamacala omabini asayiniweyo
Intsebenziswano ka-Zhuo Da no-King Kong iyakuba luphuhliso lwe-Shijiazhuang-yokwakha indibano ebaluleke kakhulu. Ukuzimasa intlanganiso yamasebe afanelekileyo, utshilo urhulumente wase-Shijiazhuang kamasipala ubambe ukubaluleka okukhulu kwindibano yeshishini lokwakha, kwaye uphuhlise iinjongo zophuhliso ezihambelanayo, intsebenziswano yase-King Kong kuphuhliso lweprojekthi yokubonisa yokwakha, isixeko kunye nePhondo le-Hebei. ukukhuthaza ukusetyenziswa kwesakhiwo esiluhlaza sentsimbi sokwakha umlinganiso, ekhokelela kwindibano yePhondo le-Hebei, kuphuhliso lweshishini lokwakha. “Ndiyathemba ukuba la macala omabini ahlanganisene ngokuqinileyo, ukuze iprojekthi iqale kwangoko, ukwakha ngokukhawuleza, umfanekiso, ukuze abantu balonwabele icandelo lezindlu likazwelonke, izibonelelo zeshishini.
Ixesha Post: Dec-04-2019
Ulwakhiwo lweZakhiwo zentsimbi, I-Angle yentsimbi yokuThutha amandla eNqaba, Inqaba kaMasipala yoNxibelelwano, Ulwakhiwo Tube Steel, Umbane weNsimbi yeNqaba yombane, Umbane we-Angle Steel Towers,